Shirka dib u eegista qorshaha nafaqada dalka oo Muqdisho ka furmay | KEYDMEDIA ONLINE
Shirka dib u eegista qorshaha nafaqada dalka oo Muqdisho ka furmay
Hay’adda UNICEF ayaa warbixin ay soo saartay sanadkii 2018 ku sheegtay in carruur ka badan 1.2 milyan oo Soomaali ah ay la il daran yihiin nafaqo darro.
Shirka dib u eegista iyo qorshaha nafaqada ee sanadka 2020/21 ayaa maanta si rasmi uga furmay magaalada Muqdisho.
Shirkan oo ay soo agaasintay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waaxdeeda daryeelka iyo nafaqada ayaa diiradda lagu saari doonaa dib u eegista heerarka kala duwan ee nafaqada iyada oo warbixinno kala duwan looga dhageysan doono saraakiil caafimaad oo ka kala socota dowladda federaalka iyo maamullada xubnaha ka ah.
Sida uu qorshuhu yahay, shirkan oo socon doona muddo saddex cisho ah waxaa ka soo qeybgalay masuulyiinta wasaaradda caafimaadka iyo kuwa maamullada dalka oo ay wehliyaan saraakiil ka tirsan hay’dda UNICEF.
Dhibaatooyinka nafaqo-darrada ee Soomaaliya ayaa la soo fac tirsaday sanadihii badnaa ee ay dalka ka jireen colaadaha iyo abaaraha is biirsaday.
Guud ahaan dunida 45% geerida soo wajahda carruurta dunida ayaa loo aaneeynayaa in ay salka ku haysto nafaqo xumo baahsan oo carruurta u nugleysa geerida.